UEnoch Mankayi Sontonga Wasishiyela Imbewu Yomculo Yenkumbuzo Ngenkululeko Yethu
28/04/2017 11:59 SAST | Updated 28/04/2017 11:59 SAST
Amaphupha akhe neminqweno yakhe yayikukubona abantu abantsundu bekhululekile kwaye bephila ubomi obunikeza umdla, obungena buhlwempu.
Usuku lwayizolo, lusuku olubalulekileyo kuthi bantu baseMzantsi Afrika. Olusuku lusikhumbuza ngomhla apho abemi belilizwe ababecinezelekile bathatha inxaxheba okokuqala kulwenyulo lukawonke wonke njengelizwe elikhululekileyo. Inkulu into eyenzekayo ngonyaka ka1994, sisuka kude singumzi ontsundu. Kodwa iziqhamo zalenkululeko azibonakali zona, sisahlupheka, ooTata noMama bethu basasebenza okwamakhoboka.
Andiqondi ukuba ngumfanekiso uEnoch Sontonga awayenawo lo ngenkululeko, esaphila. Amaphupha akhe neminqweno yakhe yayikukubona abantu abantsundu bekhululekile kwaye bephila ubomi obunikeza umdla, obungena buhlwempu.
Olu suku, lwamashumi amabini anesixhenxe kuTshazimpuzi, luyiholide eMzantsi Afrika. Ngalemini, ngo 1994, izwe lethu laqhuba ukhetho lwethu lokuqala apho kwaVota khona isininzi. Unyaka ka'94 weza nesithembiso zokuba izinto ziyakutshintsha, yeyiphi yona lenkululeko nangona uninzi lwethu lusentilongweni? Sibhiyoza njani namhlanje, ekubeni isininzi somzi kaPhalo siphila entluphekweni?
Singabona bantu basokolayo, kuthiwa sinikiwe amathuba alingeneyo nezinye intlanga, kodwa iyathandabuzeka lenyewe kuba imihlaba yotatomkhulu etyebileyo ayikabuyiswa. Abantu abaNtsundu bayalamba, kwaye iNkokheli zethu zona azizimiselanga kuncedisana nathi sizokuphila ubomi obuphuchukileyo.
Umqulu wamalungelo ethu singabantu, nokuba uyeyiphi na intlanga ubhaliwe kumgaqosiseko woMzantsi Afrika. Ewe, siyaziqonda iimeko zolwaphulo-bulungisa zamaxesha ethu adlulileyo; sibanika imbeko abo beva ubunzima bebulalekela ubulungisa nenkululeko elizweni lethu. Lenkululeko ayizanga lula, kwaye wonke umntu omnyama uyawuvuma lo mgaqo-siseko ukuba ungowona mthetho wongameleyo kwiRiphabliki yethu.
IDemokhrasi yethu eMzantsi Afrika imele ezi zinto, ngokuvela kwazo kuMqulu Wamalungelo:
(1) Lo Mqulu wamaLungelo ulilitye lembombo lentando yesininzi eMzantsi-Afrika. Uqulethe amalungelo abo bonke abantu elizweni lethu kwaye uqinisekisa sokuba ngumntu, ukulingana nenkululeko yentando yesininzi.
(2) Urhulumente makawahlonele, awakhusele, awakhuthaze kwaye awafezekise amalungelo akuMqulu wamaLungelo.
(3) Amalungelo akuMqulu wamaLungelo anokuthi asikelwe umda lusikelo-mda olukwisiqendu 36, okanye olukwenye indawo kuMqulu.
Ukusebenza kwawo 8.
(1) UMqulu wamaLungelo usebenza kuwo wonke umthetho, kwaye unkqamangela abawisi-mthetho, urhulumente, iinkundla nawo onke amacandelo karhulumente.
(2) Okutshiwo kuMqulu wamaLungelo kunkqamangela umntu okanye inkampani, ukuba kuyasebenza kuyo, kuxhomekeke nasekubeni kusebenza kangakanani, kucingelwa ubunjani belungelo nobunjani boxanduva oluza nelungelo elo.
(3) Xa isebenzisa okutshiwo nguMqulu wamaLungelo kumntu okanye kwinkampani ngokwesiqendwana (2), inkundla– (a) ukuze iphumeze ilungelo elikuMqulu, mayisebenzise, okanye ukuba kuyimfuneko, iphuhlise umthetho wohlobo olungabhalwanga phantsi, xa umthetho wepalamente wona ungalifezekisi elo lungelo; kwaye (b) isenokuphuhlisa imigaqo yomthetho wohlobo olungabhalwanga phantsi ukulisikel' umda ilungelo, kodwa kuxhomekeke ekubeni oko kusikelwa umda kuyavumelana kusinina nesiqendu 36(1).
(4) Inkampani inelungelo lokuxhamla kumalungelo akuMqulu wamaLungelo kangangoko kufunwa bubunjani bamalungelo nabubunjani baloo nkampani.
Usuku lweNkululeko kumele lusikhumbuza intsukaphi nemvelaphi yethu, kwaye ku khuthaze thina nabameli bethu ukuba umsebenzi usemninzi okufuneka wenzeke eMzantsi Afrika. URhulumente usekelwe kwintando yabantu ukuba aphucule ixabiso lokuphila kubo bonke abemi.
USontonga ngoku ebhala lengoma ethi Nkosi Sikelel' iAfrika, wayenjenjalo ngokuqinisekileyo ukuba ufuna izwe elinjani. LeNgoma ibiyindlela yabantu abantsundu ukuba bakwazi ukukhokha amandla ngemihla yembandezelo. Sibulela umbono wabantu abafana noSontonga, eyethu yeyokuba siqhubeke apho athe washiya khona, sizoqinisekisa ukuba iminqweno yakhe ngoMzantsi Afrika nabantu abantsundu iyafezeka.
MORE:Enoch Sontongafreedomfreedom dayhuman rightssouth africaVoices